Soo iibso Pregnyl ee Thailand - hoormoonka stabdhabka anabolic ee Bangkok
qiimaha joogtada ah 3,000.00 ฿ Sale
Title Title - Waa la iibiyaa
Pregnyl ® 5000 IUpowder xal xal.
Si wadajir ah ula socda amarkan
Walaxda firfircoon ee lakabka waa gonadotropin bini-aadanka ah,
Waxaa laga helaa kaadida haweenka uurka leh.
Pregnil waxay kicinaysaa hormoonka steroid ee qanjidhada galmada sababtuna tahay saameynta,
Calaamadaha hormoonka luteining human (LH).
Dumarka, daroogadu waxay sababtaa kor u kicinta synthesis of progesterone iyo estrogens ka dib markii ovulation,
Marka la eego bukaanka labka ah, uurka waxay kicisaa kicinta synthesis of testosterone.
Aragga muuqaalka difaaca jirka ee ka hortagga gonadotropin bini-aadanka ah ee jidhka ah laguma arag iyada oo la hirgelinayo uurka.
Xaddiga ugu badan ee gonadotropin bini-aadanka ah (hCG) ee ku jira dhiigga dhiigga ee haweenka ayaa la go'aamiyaa saacadaha 20,
Raga - ka dib saacadaha 6 (ka dib markii la muday, marmarka qaarkood hal mar).
Faraqa udhexeeya daawooyinka farmaajo ee ragga iyo dumarka badanaa waxay ugu wacan tahay qarada weyn ee dufanka subcutanous
Fibreebaha dumarka ku jira dabada. Ka duritaanka duritaanka kaadimareenka, HCG waxaa si fiican loogu faafiyaa dhiigga.
Nolosha nuska ah ee dhicida waa saacadaha 33. Qiyaas ahaan 80% daawada ayaa lagu burburiyay unugyada kelyaha. Joojinta - kaadida.
Tilmaamaha loo isticmaalo:
• hoos u dhac ku yimaada kartida taranka ee la xidhiidha kacsanaanta idiopathic;
• Dib u dhac ku yimaada horumarinta galmada ee wiilasha, sababtoo ah la'aanta gonadotropic function of unugyada pituitary;
• Cryptorchidism (marka laga reebo maqnaansho anatomical ah).
• barnaamijyada ART (oo lagu caawiyo tiknoolojiyada taranka) si loogu diyaariyo tufaaxa balaastiga oo loogu talagalay daaweynta habka loo yaqaan "hyperstimulation overview";
• Soo-saarista ugxan-la'aanta ilmo-mareenka oo la xidhiidha korriin korriin ah ama kicinta;
• Taageerida marxaladda luteal ee wareegga caadada (oo ay ku jiraan xilliga ilaalinta malawadka ee la xakameynayo tiknoolajiyada taranka) oo ay weheliyaan gonadotropin-sii deynaya lamid ah hormoonnada ama daawooyinka kale ee lagu dhiirigelinayo ugxanta dumarka dhalmo la'aanta ah ee ay sababto niyad-jebinta oo ay ugu wacan tahay dhaqdhaqaaq aan fiicnayn ee estrogens oo ah asal raashin ah Sida ku xusan qoondaynta WHO - nacnacnaanta kooxda koowaad ee ugxan-yari).
Ka hor inta aan la gelin hannaanka firfircoon ee lyophilized of decolour, xalka ku lifaaqan ayaa lagu daray. Si tartiib tartiib ah u marsiiya. Xalka diyaarinta ma ahan mid ku xiran kaydinta, maaddaama ilaalin dheeraad ah ee sterility ee xalka aan la damaanad qaadin. Qiyaasahaani waa qiyaas, daaweyntu waa in ay si toos ah u dhisto takhtarka iyada oo ku xiran ficil-celinta lagama maarmaanka u ah hirgelinta jebinta.
U diyaargarowga tuunbada si loo xakameeyo ama soo jiido ugxanta: marka la isku duro qiyaasta 3000-10 000 IU.
Taageerida marxaladda luteal ee wareegga dhiigga: qiyaasta 1000-3000 IU hal mar maalintii. Isugeynta 2-3 ayaa la bixiyaa: waqti kasta oo 1 ah ee 9 maalmaha ka dambeeya xilliga guurka ama dibedda ka dib (tusaale ahaan: kicinta malaxda ee 3, 6 iyo 9).
Marka dhalmo la'aanta ay sabab u tahay xadgudubyada habraaca, spermatogenesis ayaa lagu qoraa iyadoo lala socdo hormoonka hormone-kicinta hormoonka 1 maalintiiba ama 2-3 jeer usbuucii ugu yaraan 3 bilooyin si loo hagaajiyo tayada iyo tirada lammaanaha. Waxaa loo isticmaali karaa sidii monotherapy ah. Daawada ayaa loo qoraa 1000-2000 IU. Inta lagu jiro hordhaca fungus, waxaa lagama maarmaan ah in si ku meel gaar ah loo joojiyo daaweynta beddelka ah ee testosterone, haddii ay jiraan.
Horumarinta galmada ee gabdhaha - ugu xun ayaa lagu qoraa qiyaasta 1500 IU, koorsada daaweynta - ugu yaraan 6 bilood. Daawada ayaa la qaadaa 2-3 toddobaadkii.
Cryptorchidism: carruurta da'doodu ka hooseyso 2 da'da, qiyaasta 250 IU waxaa la siiyaa waqtiyo 2 maalmaha 7 oo leh koorso ugu yaraan 6; Laga soo bilaabo 2 illaa 6 sanado - 2 wakhtiyo maalmaha 7 ee koorsada 500-1000 IU ee bilaha 6; Carruurta ka badan sanadaha 6 - 2 wakhtiyada 7 ee bilaha 6 ilaa 1500 ME. Haddii ay dhacdo saameyn aan ku filneyn, koorsada daaweynta waa la soo celin karaa.
Dhibaatooyinka ay keento
• Cudurka 'hyperstimulation syndrome',
• Is-beddel aan loo baahnayn ee ugxan-yari.
Calaamadaha hurgumada fudud ee ugxan-yari: lallabbo, xanuunka caloosha, shuban, xanuunka feeraha, korodh yar ama dhexdhexaad ah oo ku yimaada xajmiga ugxan-sidaha, ama muuqaalka sawirada qanjirka. Calaamadaha uur-kujirida ee uur-ku-jirka ah: horumarinta hababka uur-jiifka ah ee uur-jiifka ah (kuwaas oo u nugul inuu dilaaco), korodhka miisaanka, muuqaalka ascites, horumarinta dhibaatooyinka tromboembolic iyo hydrothorax.
Ragga: dareeraha iyo xajinta sodium ee jirka sababtoo ah qaabka koritaanka iyo koritaanka, isbeddelada sii kordhaya ee unugyada qanjirada, ginecomastia, korriinka iyo xoojinta guska sababtoo ah kordhinta xoojinta testosterone ee dhiigga, dheecaannimada ibta naaska, yaraanta xiniinyaha ee kaneecada aan caadiga ahayn, shakhsiyadda isbeddelka, Calaamadaha wajiga koowaad ee baaluqnimada.
Ragga iyo dumarka: waxaa laga yaabaa in ay dhibaato ka soo gaarto goobta duritaanka sababtoo ah asalka biological ee kalluunka (xanuunka, ciriiriga, nabar, cuncun, barar). Dareen-celin-xumada (xummad, finan yaryar) sidoo kale waa suurtogal.
• Buro-adare-ku-tiirsanaan (naas-nuujin ama naas-nuujin lagu sameeyay ragga, kiniiniyada prostate);
• cudurrada indho-beelka ee aan la daaweyn (faa iidada shaqeynta adrenal, hypothyroidism, hyperprolactinemia);
• Kicinta haweenka ee la xidhiidha xayiraadda tuubbooyinka dhoobada;
• kansarka ugxan-sidaha,
• Dareen-celinta xasaasiyadeed ee daawooyinka hoormoonka gonadotropic ama mid ka mid ah qaybaha fungus.
Pregnil lagama hor istaago uurka, waxaa loo qoraa si loo ilaaliyo marxaladda luteal ee wareegga caadada. Si kastaba ha noqotee, laguma talinayo in daawada loo isticmaalo hooyooyinka kalkaaliyaha ah.
Xaddiga xad dhaafka ah:
Gonadotropin foloraydh ah ayaa lagu gartaa sunta aad u hooseysa. Calaamadaha xad-dhaafka ah ee xad-dhaafka ah ee maamulka maskaxda laguma sheegayo. Dumarka oo ka soo horjeeda asalka xad dhaafka ah ee lakala, sharaxaad la'aanta ugxan-xumada ayaa dhici karta.
Dufanka lafaha leh ee loogu talagalay diyaarinta xal cirbad ku jirta dhalada 1500 IU; 5000 IU. Xirmada waxaa ku jira dareeraha. Sanduuqa kartoonka, ampoules 3 ayaa ku jajaban xirmo xirmo ah.
Uurka waa in lagu keydiyaa qaboojiyaha xaaladaha mugdiga ah heerkulka 2-15 ° C ee aan ka badnayn sanadaha 3. Fiiri xaaladaha heerkulka ee la cayimay inta lagu jiro gaadiidka.
Waxyaabaha firfircoon: Gonadotropin Chorionic.
Maaddooyinka caawiya: mannitol, sodium dihydrophosphate anhydrous, sodium hydrophosphate anhydrous, carboxymethylcellulose sodium.
Hormones, analogs iyo daawooyinka anti hormonal ah
Hooyo jinsi ah
Daawooyinka ku saleysan hormoonada jinsiga dumarka iyo kuwa isku dhafan
Waxaa jira khatar sare oo uureysi ah oo uureysi ah oo lala yeesho induction of ovulation by chorionic gonadotropin. Marka laga hadlayo tiknoolajiyada taranka ee la gargaarey, suurtogalnimada dhicin-xumada ayaa kordheysa. Haddii ay jirto tilmaam ku saabsan xad-gudubyada tubaakada - waxay kordhisaa halista qiyaasta qoolanka (ectopic) uurka. Xaaladda dambe, ka dib bilowga uurka, booska uterine ee ukunta uurjiifka waa in la xaqiijiyaa baaritaanka ultrasound ee ilmo-galeenka. Ka hor inta aanad qorin daroogada, endocrinopathies oo aan xakameynin asal ahaan aan caadi ahayn (laf-dhabarka qanjirka thyroid, qanjidhada qanjirka ama qanjirrada adrenal) waa in laga reebo.
Uurka ku jira haweenka qaba ilmo la'aanta sababo la xidhiidha korriin kobcin ah ama korid la'aan ayaa keenta in ay u horseeddo habka loo yaqaan 'hyperstimulation ovumimulation' oo ay la socdaan maamulka isku dhafka ah ee hoormoonka follicle-stimulating hormone. Xaaladahaan, kahor iyo inta lagu jiro daweynta (waqtiyada joogtada ah), kormeerka ultrasound waa lagama maarmaan si loo qiimeeyo horumarka qaaciddada. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa in si go'an loo go'aamiyo waxyaabaha estradiol ee ku jira serum dhiigga. Korodhka degdegga ah ee estradiol (2-laab loogu talagalay maalmaha 2-3) ayaa tilmaamaya horumarinta tiro farabadan. Dhiig-baxa aan loo baahneyn ee ugxan-sidaha ayaa lagu xaqiijin karaa baaritaanka ultrasound ee ugxan-yari. Haddii ay dhacdo in la xaqiijiyo ogaanshaha cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la isla meel dhigo hirgelinta dhaqaalaha ay ku jirto hormoonka kacsan ee kicinta, sababtoo ah waxaa jira halis loogu jiro horumarinta cudurrada uur-ku-jirka ee uur-jiifka ah iyo soo-saarka ugxanta badan. Daryeel gaar ah waa in la qaato si loogu daweeyo bukaanka leh ugxan-yaryar badan.
Hirgelinta gonadotropin ee bini-aadanka ayaa keena kororka dhajinta ee asrogens, sidaas awgeed waxaa jiri kara xaalad xumo xaalad guud ama dib-u-dhicin la'aanta wadnaha iyo xidid la'aanta cudurrada wadnaha, xanuunka dhanjafka (oo ay ku jiraan xuubka xannuunka anamnesis), hypertension, hawl-kicinta xummadda, suuxdinta . Dadkaas oo kale, daroogada waxaa lagu maamulaa taxaddar daaweyn caafimaad oo dhow.
Si looga hortago kufsashada galmada ama marxaladaha dhalmada ee dhalinyarada da'yarta inta lagu jiro da'da, waxaa lagama maarmaan ah in lagu qoro taxaddar muddadan. Xaaladdan oo kale, soo bandhigida qashinka waa in la sameeyaa iyadoo la kantaroolayo nidaamka nidaamka muruqyada.
© 2018, Xuquuqda daabacaadu way xifdisan sharciga copyright BuyHGHThailand.com | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Shuruudaha adeegga | siyaasadda Soo celinta | Waxaanu u balanqaadaynaa | Muuji Goobta Taageero: FitHamster | Iskaashiga: HGH Thai